डेंगुको संक्रमण बढ्यो, प्रभावितलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने | Sagarmatha TV
डेंगुको संक्रमण बढ्यो, प्रभावितलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने
काठमाडौं–गत भदौ १२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर डेंगु नियन्त्रण बाहिर गईसकेको घोषणा गरेपछि अहिले लामखुट्टे नष्ट गर्न सेना परिचालन गर्नेसम्मको समाचार आईरहेका छन् । डेंगु असाधारण तरिकाले फैलिएको भन्दै मन्त्रालय एक्लैले नियन्त्रण गर्न नसक्ने जनाउ दिएपछि सेना तथा प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने अवस्था आएको हो । जबकी पछिल्लो ४५ दिनको अवधिमा १ हजार ६ सय विरामी यसको संकमणमा परेका छन् ।
डेंगु, लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने घातक रोग हो । एडिस जातिका एजिप्टाइ अल्बोपिक्टस पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भाइरल रोग लागेमा ज्वरो आउने, आँखा रातो हुने र दुख्ने, टाउको, पेट, जोर्नी र मांसपेशी दुख्ने, आलस्य हुनेजस्ता सुरुवाती लक्षण देखिन्छन् । डेंगु लाग्दा रगतमा पानीको मात्रा कम भई रक्तचाप कम हुन्छ । लगातार एक्कासी उच्च ज्वरो आईरहे त्यो डेंगुको लक्ष्यण हो ।
सामान्य अवस्थामा सफाईमा बिशेष ध्यान दिंदा दिँदै सर्ने डेंगुको संक्रमण अहिले ४२ जिल्लामा पुष्टि भईसकेको छ । तत्काल उच्च सर्तकता नअपनाएमा यसले थप महामारिको रुप लिने आशंका बढ्दै गएको छ । यो घातक संक्रमणबाट बच्न घर वरिपरि फोहोर हुन नदिने, पानी जम्ने गमला, फूलदानी, खालीबट्टा लगायतका भाँडा घरआँगनमा नराख्ने, आफु बसेको वरिपरी पानी जमेर फोहोर हुन नदिन चिकित्सकहरुको सुझाव छ । डेंगुको संक्रमणबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्न जरुरी हुन्छ ।
डेंगु संक्रमितको निःशुल्क उपचार
डेंगुको प्रकोप असाधारण तरिकाले बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियन्त्रणका लागि आमनागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने- ‘डेंगु नियन्त्रणका लागि आमनागरिकले घर वरिपरिको वातावरण सरसफाई गरेर पानी जम्न नदिन ध्यान दिनु पर्छ । यसको एक मात्र उपाय भनेको वातावरण सफाई राख्नु हो ।’
मन्त्रालयका अनुसार, विगत ४०/४५ दिनको अवधिमा १ हजार ६ सय विरामीमा यसको संकमण पाईएको छ । धरान, डोटी र चितवनमा डेंगुकै कारणबाट ३ जनाले ज्यान गएको छन । शुरुमा गत जेठमा धरानबाट शुरु भएको डेंगुका कारण अहिले अधिकांश जिल्ला उच्च जोखिममा रहेको शुक्रराज सरुवा रोग केन्द्र टेकुका चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुनले बताएका छन् । डा. पुनले भने, ‘डेंगु नियन्त्रणका लागि घरदैलो रुपमा अभियान चलाउनु पर्ने भन्दै आम नागरिक सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।’
यसैका साथै नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले डेंगु नियन्त्रणका लागि सरकारले पूर्व तयारी थालेको जनाउँदै डेंगु संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको छन् ।
राज्यमन्त्री यादवले भने- ‘डेंगु नियन्त्रण र यसको उपचारका लागी सरकार पूर्व तयारीमा रहेको छ । यसबाट बच्नको लागि सरकारले अभियान नै चलाएर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ ।’ यसको लागि सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई ८० लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाहरुलाई १० लाख दिएको छ । डेंगुबाट प्रभावित भएका ३२ जनाको काठमाडौंको टेकु अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०७१ साल यता नेपालमा ९ हजार ९ सय ४७ जनामा डेंगुको संक्रमण फेला परेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा यसको संक्रमण देखिएको छ भने कर्णाली प्रदेशमा यसको प्रकोप कम देखिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, यो दशकमा विश्वभरि नै डेंगु असाधारण रूपमा फैलिएको छ । विश्वमा वर्षेनी ३९ करोड मानिसमा डेंगुको संक्रमण हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ । जसमा नेपाल जस्ता विकासन्मुख तथा अल्प विकसित मुलुक बढी जोखीममा छन् ।
विचारशील नेपालको चलायो रक्तदान कार्यक्रम : ६० जनाले गरे रगत दान
इष्टर्न रिजन क्रिकेट, नेपाल मलेसियासँग २२ रनले पराजित
कोरोना असरः विदेशमा हुने भ्रमणवर्षको प्रचार स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय
इष्टर्न रिजन क्रिकेटः मलेसियाले दियो १ सय ५५ रनको लक्ष्य
एक सय दिनमा साढे ९ हजार खाल्डा पुरेको मन्त्री नेम्वाङको दाबी
सरकारको लापरवाहीले जनक शिक्षा बर्सेनि बैंकलाई करोडौं ब्याज तिर्न बाध्य
नक्कली बीउ पीडित कृषकलाई सरकारले २० प्रतिशत राहत दिने
किशोरीलाई आत्मरक्षा तालिम दिइने
अमेरिकाले तालिवानीहरुसँग शान्ति सम्झौता गर्ने
इस्टर्न रिजन टी-२० मा आज नेपाल र मलेसिया खेल्दै
आजको मौसम : यस्तो छ पूर्वानुमान